Ukuphupha unganxibanga zihlangu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukuhamba kunganxitywa zihlangu kuyeyona ndlela yoqobo yokuncothuka kwabantu. Nangona kunjalo, kuye kwaba yinto enqabileyo ukuba abantu bahambe ebomini bethu ngaphandle kwezihlangu ezomeleleyo. Ngokuqinisekileyo izihlangu zibalulekile, zikhusela iinyawo zethu ekonzakaleni nakwimozulu.
Nangona kulungile ukuba sibuyele ekubalekeni singenazihlangu, sihlala sifumanisa ebusuku, xa sinokukhulula izihlangu zethu emva kosuku oludinisayo. Okanye ehlotyeni, nini ilanga uyasincumela aze asimeme ukuba sihambe singenazihlangu edlelweni. Kungayinyanga yokwenyani ukuziva iinyawo zakho ngale ndlela. Kwangelo xesha wenza into elungileyo kwimpilo yakho, kuba nabani na ohamba ngololiwe engenazihlangu kwaye omeleze imisipha yeenyawo zakhe kwaye ke unokuthintela ukungahambi kakuhle okunje ngeenyawo ezisicaba kunye neenzwane.
IBarefoot ikwalisiko kwiinkolo ezininzi. Ukukhulula izihlangu zakho luphawu lwentlonipho kunye nokuhlonela uThixo, ngakumbi xa ungena kwiindawo ezingcwele. Kumazwe anjengeJapan okanye iTshayina, ukungena kumagumbi abucala kuvunyelwe kuphela kunganxibanga zihlangu ngenxa yezizathu zococeko.
Ukuba ngoku ubaleka unganxibanga zihlangu ephupheni, oku kunokuba nezizathu ezahlukileyo kakhulu kuxhomekeke ekutolikweni kwephupha. Cinga ngemeko apho uzifumene ephupheni, apho ubuhamba ungenazihlangu. Ngaba kushushu, ngaba uye wafudukela elwandle? Uhlambe unganxibanga zihlangu? Okanye ulele ephupheni unganxibanga iinyawo?
1 Uphawu lwephupha «ezingenazihlangu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «elingenazihlangu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «elingenazihlangu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ezingenazihlangu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuphupha unganxibanga zihlangu yenye yezona mifanekiso zixhaphakileyo. Ukuba uziva ubaleka ungenazihlangu kumcimbi wephupha, oku kuyathembisa ukuba uphupha. impilo ezinzileyo kunye nentlalo-ntle engcono kwixa elizayo. Nokuba ushiya into engekhoyo ebuthongweni bakho, unokulindela impilo esempilweni.
Ukuhamba emanzini acocekileyo anokubonwa njengophawu olucacileyo ngokulinganayo ngekamva eliqinisekileyo. Ukuba kwelinye icala uhamba unganxibanga zihlangu kumatye okanye kumhlaba onamatye kwaye uziva iintlungu, kuya kufuneka ujongane nobunzima kwinkampani oyicebisayo.
Ukuba wena, njengokuphupha, ubona abanye abantu behamba benganxibanga zihlangu, uhlala ungowabo bantu bengekho lula "Baleka nepakethi" kwaye uthetha kuye wonke umntu ngomlomo. Enye ibonakala apha Ubuntu obomeleleyoukuba uhamba ngendlela yakhe kwaye uya kuphumelela kuyo.
Ukuhamba umntu ehamba enganxibanga zihlangu ephupheni emini, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, luphawu oluqinisekileyo kwaye luchaza udumo kwaye lungcono. impilo phakathi. Nangona kunjalo, ukuba uhamba unganxibanga zihlangu kwindawo yobusuku ephuphayo kwaye unamakhaphu okanye unxibe ngendlela enganxibanga, kukho umngcipheko wokuzifumana uswele kwaye ube namaxesha amnandi ambalwa ngaphambili.
Ukuba umntu ophuphayo uhamba ngeenyawo enganazi zihlangu kwaye enovakalelo engceni egqunywe ngumbethe, unako ndinethemba jonga kwikamva, njengoko kuya kubakho amathuba amahle kwiindawo ezininzi.
Uphawu lwephupha «elingenazihlangu» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba lokuchazwa kwengqondo kwamaphupha, uphawu lwephupha "elingenazihlangu" kaninzi luthetha zokuziphatha y ukunyaniseka. I-Barefoot ephupheni inokubonisa ukuba umntu ophuphayo uya kugxila ngakumbi kwizinto ezibalulekileyo zobomi bakhe kwaye anike ukubaluleka kwezinto eziphathekayo.
Ukuba umntu uhamba ephupheni ngaphandle kweekawusi okanye izihlangu kuba ezilahlekile kwaye engonwabanga ngako, oku kubonakalisa uloyiko lokungazi nto ngokuphupha ngentlupheko kunye nokunqaba. Unokoyika ukuphulukana nobomi bakho.
Kule meko, uphawu "olungenazihlangu" liphupha lingabonisa umntu oleleyo ukuba akalahleki kwiinqwelomoya eziphakamileyo, kodwa endaweni yoko emhlabeni kwaye uthobeke ebomini. Iya kuhlala ikwiifayile zakho ze- Ithuku Ulahliwe kwaye unyanisekile kwaye unyanisekile kwabanye.
Uphawu lwephupha «elingenazihlangu» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu "lwesihlangu" lwephupha lukwaluphawu lokuthobeka kwaye unxibelelwano lomhlaba olukhuselekileyo.
Abo bahamba ze benganxibanga zihlangu kufuneka balumke kwindlela yabo, kuba basemngciphekweni. Ukuba umntu udlulisela oku kwinqanaba lokomoya, iphupha kufuneka libe kulo Ingqwalaselo epheleleyo ziqhelise ukuhlala ngokuqaphela ngakumbi apha nakwangoku.